Trusty Shops|Redwin VE Body Lotion
Redwin VE Body Lotion
Product Code: oz0517
အသားရေ ပျက်စီးခြင်းကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပြီး အစိုဓါတ်ဖြည် ့ဆည်းပေးကာ အသားရေ ကြည်လင်အေးမြ၍ နူးညံ့စေသည်။
မိသားစု တစ်ခုလုံး သုံးစွဲရန် သင့်တော်သည်။
သုံးစွဲနိုင်သူများ - (၆)လ အထက် ကလေး၊ လူကြီး အသားရေ အမျိုးအစား အားလုံးသုံးစွဲနို်င်သည်။
နေ့စဉ် လိုအပ်သော အာဟာရ ဗီတာမင် E နှင့် evening primrose oil ပါရှိပြီး လျင်မြန်လန်းဆန်းစွာ အသားရေကို အစိုဓာတ် ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ တမူထူးခြားသော ဖော်မြူလာဖြင့် အသားရေ အစိုဓာတ်ကို သိုလှောင်ပေးနိုင်ပြီး အသားရေ cell များထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အသားရေကို ပိုမိုကြည်လင်ပျော့ ပြောင်းစေပြီး မျက်နှာအတွန့်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ကိုထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်သည်။ Cell ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို လျင်မြန်စေပြီး အသားရေပြန်လည် ပျော့ပြောင်းစေကာ ချောမွေ့နူးည့ံ နုပျိုစေ၍ အသားရေ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် ယားယံခြင်း သက်သာစေသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ - လျင်မြန်လန်းဆန်းစွာ အသားရေကို အစိုဓာတ်ဖြည့်စွက် ပေးနိုင်သည်။ အသားရေ cell များ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အသားရေကို ပိုမိုကြည်လင်ပျော့ ပြောင်းစေပြီး မျက်နှာအရေးကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်သည်။ Cell ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို လျင်မြန်စေပြီး အသားရေပြန်လည် ပျော့ပြောင်းစေကာ ချောမွေ့နူးည့ံနုပျိုစေ၍ အသားရေခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းသက်သာ စေသည်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - glycerin, Vitamin E, ရေသန့်၊ sorbitol, evening primrose oil
You're reviewing: Redwin VE Body Lotion
မျက်နှာအသားအရည်ခြောက်သွေ့သူများ , အရေးအကြောင်းများကိုသိသာစွာပျောက်ကင်းစေသည် Eaoron face Lotion
Ladykin Collagen Hydro Il ...
အသားအရေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမည့်ပါရာဘမ်နှင့် ဓာတုဗေဒဆိုးဆေးပါဝင်မှူမရှိသည့်အသားဖြူ Cream ဖြစ်ပါသည်။
Plunkett's 99% Pure Aloe ...
အပြင်ထွက်ပြီးတိုင်းရရှိလာတဲ့ဒဏ်တွေကို ပြုပြင်ပေးပြီး နေလောင်ခြင်း၊ လေးပြင်းတိုက်ခြင်း၊ အရေခွံကွာခြင်းများကို အထူးကူညီပေးသည်။
Close Up Decuple Shimmer ...
Close Up Decuple Shimmer Primer
အံသြဖွယ်ကောင်းလှသည့် ပုလဲမှူန်လေးတွေက အရေပြားပေါ်တွေင် ညင်သာစွာတွယ်ကပ်နေလို့ သဘာဝကျကျနူးညံ့စွာလင်းလက်တောက်ပါစေပါသည်။
Eaoron Crystal White Body ...
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို လှပဖြူဖွေးစြေ့ပီး အရေးအကြောင်းတွေ၊ အစက်အပြောက်တွေကို ရှင်းလင်းပေးသည်။
ON: The Body Perfume Loti ...
ON: The Body Perfume Lotion
•	Silky-Essence formula and sheer butter promiseababy-soft skin
ChooseSweet LoveHappy Breeze
Syrene Aqua Light Moistur ...
Syrene Aqua Light Moisture Gel Lotion
Light moisture ဖြစ်လို့ အသာအရေကို တောက်ပကြည် လင်စေသော syrene lotion
LadyKin Confidence Nude F ...
LadyKin Confidence Nude Face BB Cream SPF 45 PA++
နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ပြင်ပတွင် သွားလာရခြင်းများကြောင့် ကြုံတွေ့နေရသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုအထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုုင်သည့်အပြင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော အရေပြားကို လန်းဆန်းစေရန် အားဖြည့်ပေးနိုုင်ပါသည်။
DHC4in 1 Skin Care
4 in 1 Skin Care တစ်ဘူးထဲမှာဘဲ အစုံပါပြီး လက်ဆောင်ပေးဖို့လည်းသင့်လျော်ပါသည်။
Ego Sunsense Sport Moistu ...
Ego Sunsense Sport Moisturising SPF50+
SunSense Sport isahighly protective lotion best suited to those enjoying an active, outdoors lifestyle. Suitable for all
G&M Lanolin Oil Cream
ဟေမာန်ကာလ ဆောင်းရာသီဥတုတွင် သင့်အသားရေကိုချောမွေ့လှပကာနူးညံ့မှုကိုပေးဆောင်မည့် Cream .
Thursday Plantation Tea Tree Hand Body Lotion
Thursday Plantation Tea Tree Hand & Body Lotion ကသဘာဝအဆိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အဆိုးဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။
ChooseLux Body Lotion
Cetaphil Intensive Moistu ...
အခုလိုရာသီမျိုးမှာ အရေပြားတွေက ခြောက်ကပ်လို့ စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာကို စိုပြေေျာ့ပြောင်းစေပါတယ်။
Eaoron Hyaluronic Acid Collagen Essence အလွရည္
Ego Sunsense Junior SPF5...
Ego Sunsense Junior SPF 50+ UVA & UVB Lotion
It isa2-hour water resistant formulation with SPF 50+, broad spectrum protection.
Bio-Oil Specialist Skinca ...
အထူးအရေပြား အလှဆီ - အမာရွတ်အသစ်၊ အဟာင်းများနှင့် ဗိုက်ကြောပြတ်ရာ သွင်ပြင်တွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန် စေသည်။
Cemoy - Toner & Lotion
39,500 MMK ~ 45,000 MMK
ဆေးဖက်ဝင်အပင် Botanical နှင့် Cosmetic ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ဗီတာမင် E / C တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်ထားတဲ့ Lotion/ Toner
Du'it Hands Skin Repair
ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းပြီး အက်နေလို့ ကျိန်းစပ်စပ်ဖြစ်တတ်တဲ့ လက်တွေအတွက် (၅)ရက်အတွင်း အကျိုးတက်ရောက်မှုမြင်တွေ့နိုင်။